Megacubo: Ọ bara uru ịba ụba na ịba ụba IPTV ọkpụkpọ | Site na Linux
Megacube bụ nke anyị na-esote ngwa multimedia a ga-enyocha. Mgbe biputere banyere Popcorn na Stremio, ugbu a ọ bụ uzo nke ihe a na-adọrọ mmasị ma dị egwu Ihe ọkpụkpọ IPTV, nke ọ dị mfe ịhụ Na ndụ Tv na vidio n’ Internetntanet.
Megacube bụ mmemme dị egwu iji rie ọdịnaya sitere na Gụgharia TV ọwa, na andntanetị na ebe ọ bụla n'ụwa, gụnyere Ọwa redio. Na ihe niile, site na a enyi na enyi na mfe interface nke ahụ na-adịkarị mma, oge ụfọdụ karịa nke mmemme ndị ọzọ yiri ya, maka ụfọdụ ndị ọrụ.
Dị ka ukara website nke ngwa, a kọwara ya dị ka ndị a:
"MegaCubo bụ ọrụ mmeghe na-emeghe, nke dịịrị onye ọ bụla, na-enweghị usoro ịkwụ ụgwọ. Ebumnuche ya bụ ịnye ndị ọrụ Internetntanetị ahụmịhe dị mfe, ngwa ngwa na nke bara uru iji lelee telivishọn n'ịntanetị, na-ezere nsogbu ndị ama ama na-eche ha ihu mgbe anyị na-anwa ikiri telivishọn site na ihe nchọgharị ahụ.".
Ọzọkwa, ọ na-abịa na executables maka Windows (.exe) na Linux (.AppImage / .tar.gz), ma bia site na nkwado asụsụ na Spanish, Bekee, Portuguese na Italian. Dika enwere ike ile ya ma budata ya na saiti ha GitHub.
N'ime njirimara ma ọ bụ arụmọrụ nke ngwa ahụ nke na-eme ka ọ pụta ma ọ bụ pụta ìhè, ndị a bụ:
Kpụrụ Miniplayer: Nke ahụ na-akwado mmeputakwa na «Miniplayer» ma ọ bụ Miniature Player mode a aruputara ọdịnaya, iji nwee ike ịnweta saịtị ma ọ bụ ngwa ọ bụla ọzọ ka ị na-elele ya, na akuku ihuenyo nke mmasị anyị.
Ọrụ mkpọsa mgbasa: Nke ahụ na-ebelata ma na-eme ka ngosipụta nke ọdịnaya mgbasa ozi n'ụzọ dị mma maka onye ọrụ, site na ịnwe ọdịnaya nke gụnyere ha.
Mfe njikwa nke Ọkacha mmasị: Nke na-enye ohere ịgbakwunye oghere mepere emepe na ngalaba ọkacha mmasị, iji lelee ha ozugbo. Iji gbakwunye, pịa igodo «Ctrl + D» na wepu ya, pịa igodo «Ctrl + D» ọzọ, ọ bụrụ na ọwa ahụ meghere ma ọ bụ na-agbanye.
Ndị ọzọ: Obodo na-eto eto nke ndị ọrụ na-agbakwunye ọwa ọhụrụ, nke nwere ike ịpụ na ngalaba ọwa enyere aka ebe ha nwere ike igosi data nke ndị na-ege ntị nwetara na almostntanetị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. N'etiti ndị ọzọ, dị elu.
Wụnye Megacube dị mfe, ị ga-agba ọsọ na a mgbọrọgwụ ọnụ la iwu ịtụ na-esonụ:
N'okwu nke onwe m, m si na ụzọ / opt mụ na onye ọrụ m ikike nchịkwa (sudoers). Mgbe emechara iwu ahụ, ma ọ bụrụ na enweghị njehie, enwere ike igbu ya site na ịnweta ụzọ na isi menu, multimedia Atiya.
Mgbe amalitere maka oge izizi, ngwa ahụ jụrụ ma ịchọrọ iji ya nanị ma ọ bụ ọnọdụ ekekọrịta. Maka ule anyị, anyị na-ahọrọ nhọrọ nke abụọ, wee họrọ ya ihe nchọta anyị gara ịchọ ọdịnaya dị n'ịntanetị na dabara na a ụkpụrụ ọchụchọ. Ozugbo enwetara njikọ wee họrọ, n'etiti ọtụtụ egosipụtara, ngwa ahụ na-agba mbọ ijikọ ọdịnaya nke ọwa ahọpụtara iji gosipụta ya na ihuenyo, ọ bụrụhaala na enwere ike ịnweta ya maka oge ahụ.
Na nkenke, na n'onwe m, ọ dị m ka a ụzọ ọzọ dị mma iji bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ ọ na-enweghị ike iji Kodi, Stremio, Popcorn Oge na ị chọrọ ihe karịrị nanị iji VLC ma ọ bụ mmemme nke Nsogbu. Ana m ekwusi ike na dịka ahụmahụ m si dị, na-ewe ogologo oge iji mepee, ọ bụ ezie na echere m na enwere ike, ọ bụ n'ihi ọsọ nke njikọ Internetntanetị m.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Megacubo», a bara uru na kensinammuo IPTV Player (Internet Television), nke na-enye ihe ngwọta dị mfe ma dịkwa mfe iji lelee ngwa ngwa na ozugbo Na ndụ Tv na vidiyo site na ;ntanetị; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Megacubo: Ọ bara uru ọtụtụ asụsụ na ịba ụba ọkpụkpọ IPTV
nnukwu enyi, ọ na-ewe obere oge ijikọ, kpachara anya m na-eji ya na ubuntu cinnamon remix 20.04, yabụ na anyị ejighị n'aka ihe na-eme hehe, daalụ maka ịkekọrịta
FRANCISCO Alicea dijo
Ngwa na-adọrọ mmasị, m ga-achọ ịma ma ọ bụ maka ekwentị na igbe gam akporo
Zaghachi FRANCISCO Alicea
Enwere m nsogbu, ọ naghị enye m olu m nwere Linux mint 19.3
Daalụ Sam! Achọrọ m ịntanetị ma ahụghị m akwụkwọ ọ bụla na nsogbu ọdịyo ahụ. Enweghị m ike ịgwa gị ihe ọ bụ, ọ dị m mma mgbe m wụnye ya. M na-eji Stremio, ọ ka mma. Ana m eji ya ugbu a n'enweghi nsogbu.
Depụta ụdị ọhụrụ nke njikwa ngwugwu GNU Guix 1.1